Isicelo se-Chiefs kubalandeli ngomqeqeshi omusha - Ilanga News
Home Ezemidlalo Isicelo se-Chiefs kubalandeli ngomqeqeshi omusha
Isicelo se-Chiefs kubalandeli ngomqeqeshi omusha
UKAIZER Motaung Snr
IKAIZER Chiefs iphumele obala yenza isicelo esimqoka ikakhulukazi kubathandi bale kilabhu ngodaba lokuqashwa komlolongi wayo omusha.
Ukunqakiswana ngamagama ahlukene abaqeqeshi abangase bathathe lo msebenzi njengoba izolo ngeSonto besekugcotshwe uGavin Hunt ezinkundleni zokuxhumana njengomqeqeshi omusha wale kilabhu, kuthiwa uzosizwa nguDoctor “16V” Khumalo noKwanele Kopo wodumo kwiSuperSport United, kwenze iChiefs yaphefumula ngalolu daba.
UVina Maphosa wezokuxhumana kule kilabhu, utshele ILANGA izolo ntambama ukuthi kuyabakhathaza ukunqakiswana ngamagama ahlukene okuqhubekayo kwazise ngusihlalo wale kilabhu uKaizer Motaung kuphela ozibambele lolu daba, owaziyo ukuthi uzoluphothula nini. Uthi kumele ahlonishwe uMotaung ukwenza lo msebenzi obucayi ngaphandle kokuphazanyiswa yimibiko engamahemuhemu.
“Sicela abalandeli bethu balinde uSihlalo wekilabhu aqede ngohlelo lwakhe lokusitholela umqeqeshi omusha.
“Ukunqakisana ngamagama kuzogcina sekudala ukudideka okungenasidingo ekubeni uSihlalo esalusebenza lolu daba. Ngeke siphawule ngokuthi kuxoxwa nobani kuze kube kuqedwa konke,” kusho uMaphosa.
Wale waphetha ukuveza nje amagama abaqeqeshi uMotaung akhuluma nabo.
Ngaphandle kukaHunt, elinye igama elivelayo ngelika-Adel Amrouche waseBelgium ongumqeqeshi weqembu lesizwe laseBotswana.
Lo mqeqeshi ekhuluma ne-LANGA ngomsebenzi weChiefs, uthe: “Ngizwile ukuthi iChiefs idedele umqeqeshi wayo kodwa-ke mina kangikaze ngisifake isicelo salo msebenzi. Kungenzeka ukuthi kukhona ophakamise igama lami ngingazi kodwa mina ngokwami kangisifakanga. IChiefs yikilabhu enkulu, noma ngubani angakujabulela ukusebenza kuyona.
“Kodwa-ke uma idinga mina kuyofanele ikhulume neziphathimandla zebhola laseBotswana ngoba ngisanenkontileka.”
Ngakolunye uhlangothi, negama likaStuart Baxter ongumqeqeshi wokugcina ukunqobela iChiefs izinkomishi ngesizini ka-2014/2015, belilokhu livela kwabagaqele lo msebenzi kanjalo nelikaRuud Krol owashiya kuleli enqobele i-Orlando Pirates izicoco ezintathu ngo-2011. NelikaBennie McCarthy igama liyaqhamuka.
UMotaung uzibambele mathupha nje kulokhu, kuzokhumbuleka ukuthi nangesikhathi iChiefs isiqede iminyaka ewu-10 ingasazi isicoco seligi wenza okufanayo elanda uTed “Makepisi” Dumitru wafika wayinqoba ngesizini yakhe yokuqala ebuyisiwe ngo-2003/2004 waphinda wayivikela ngeka-2004/2005.
Ngesikhathi eshiya uDumitru wakhala ngokuthi izinto kazisenzeki kahle ngoba uMotaung usematasa, akasazithathi ngokushesha izinqumo ezidingwa yile kilabhu. Selokhu le kilabhu yashiywa nguDumitru akekho umqeqeshi osakwaze ukuyinqobela iligi amasizini elandelana.
Previous articleBagxeka abakamasikandi ngokungabeseki
Next articleUbulawe wanqunywa uqhoqhoqho kufunwa ophaqa